घुस्याहा कर्मचारीलाईलाई भैंसी घुस! - Everest Dainik - News from Nepal
घुस्याहा कर्मचारीलाईलाई भैंसी घुस!
एजेन्सी । भारतमा एकजना घुस्याहा कर्मचारीलाई सवक सिकाउनका लागि एक व्यक्तिले अनौठो उपाय अपनाएका छन् । घुस माग्ने सरकारी अधिकारीलाई घुस स्वरुप ती किसानले एउटा भैँसी दिए । भैँसी दिएनन् मात्र, त्यो भैँसीलाई ती सरकारी कर्मचारी चढ्ने गाडीमै लगेर बाँधिदिए । मध्य प्रदेशको टिकमगढस्थित खडगपूरका तहसीलदार सुनिल बर्माले एकजना किसानको जग्गाको दाखेल खारेज गर्नका लागि एक लाख भारु घुस मागेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा अर्का धर्मगुरुको यौनकाण्डको पर्दाफास, सामूहिक बलात्कारका आरोपमा पक्राउ पर्दै दाती महाराज
५० वर्षका लक्ष्मी बर्मा नामका ती किसानले तहसीलदारले मागेको एक लाख भारु घुस नगदमै दिन सकेनन् । उनले ५० हजार त नगदै दिएका थिए । तर बाँकी रकम नभएपछि उनले आफ्नो घरको भैँसी लगेर उनको गाडीमा बाँधिदिए ।
किसानले घुस स्वरुप तहसीलदारको गाडीमा ल्याएर भैँसी बाँधिदिएपछि त्यसले तहल्का नै मच्चायो । धेरै मानिसहरु त्यहाँ जम्मा भए । अन्ततः तालुक निकायका अधिकारीले ती किसानलाई तहसीलदार विरुछ उजुरी दर्ता गर्न भने बमोजिम उनले उजुरी दर्ता गरेसँगै हाल उक्त भैँसी घुस काण्डको छानविन भैरहेको बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस राहतका लागि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले लेखे प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र
ट्याग्स: Corporation, India